Uncategorized – purnakhabar.com
७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे सहमति जुटाउने सम्भावना क्षीण बनेको छ । मस्यौदा समितिको अन्तिम बैठक भोलि बोलाइएको छ । समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सकेसम्म सहमतिकै प्रस्ताव बनाउन प्रयासरत छन् । तर, गुटगत अडान कायमै रहेकाले सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको एक सदस्यले बताए […]
[ad_1] काठमाडौं । तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन, सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ । तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइन्छ । त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको […]
[ad_1] एजेन्सी । हाम्रो समाजमा हरेकका घर घरमा तुलसीको मठ र बिरुवा हुने गर्दछ । तर के तपाईलाई थाहा छ तमाम गुणले भरिएको तुलसीको बिरुवा कुन दिशामा हुनुपर्दछ ? सहि दिशामा तुलसी रोप्नाले यसले शुभ फल दिन्छ। तर गलत ठाउँमा रोप्नाले दोष पनि लाग्न सक्छ। वास्तु अनुसार यस दिशामा रोप्नुहोस् तुलसी तुलसीको बिरुवा भूलेर पनि […]
[ad_1] नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई जानकारीमोबाइलको ब्यालेन्स थाह पाउँन *400# डायल गर्नुहोस । आफ्नो मोबाइल नम्बर थाह पाउँन *9# डायल गर्नुहोस । कल फरवार्ड गर्न **21*98xxxxxxxx फरवार्ड गर्न चाहेको नम्बर# डायल गर्नुहोस । कल फरवार्ड क्यान्सिल गर्न ##002# डायल गर्नुहोस । कल वैटिंग सेवा सुचारु गर्न *43# डायल गर्नुहोस क्यान्सिल गर्न #43# डायल गर्नुहोस । मोबाइलमा […]
७ मंसिर, बुटवल । रुपन्देहीमा जारी दोस्रो संस्करणको तिलोत्तमा पि्रमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा रोयल शंकरनगर र लुम्बिनी कासाई ग्लाडियटर्स उपाधिका लागि फाइनलमा भिड्ने भएका छन् । शुक्रबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा रोयल शंकरनगरले बुटवल डाइनामाइट माथि दुई विकेट तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा लुम्बिनी कासाइले मणिग्राम किङ्गमाथि ७२ रनको जित निकाल्दै फाइनल यात्रा पक्का गरेका हुन् । […]
पूर्वप्रधान्यायाधीश गिरीको निधन – onlinedarpan:
[ad_1] काठमाडौँ, ७ मङ्सिर। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको ७५ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । २०२५ साल साउन ३० मा न्यायसेवामा प्रवेश गर्नुभएका गिरी जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरोवदन अदालत हुँदै २०६४ वैशाख असोज १८ मा प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पूर्वप्रधानान्यायाधीश गिरीको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेको छ । उहाँको निधनले […]